China abakhiqizi be-acrylic signboard bangaphandle nabaphakeli | UZhengcheng
Izimpawu zesitolo se-Jinhu Convenience Store nazo zamukela ukwakheka kwesiqeshana semibala emithathu, esilula futhi esihle. Umkhiqizo wonke usebenzisa ishidi le-acrylic laseJapan elingenisiwe, okungekho lula ukulikhubaza futhi liphele. Idizayini evaliwe ngokuphelele, engenamanzi futhi engenawo uthuli, sisebenzisa ithubhu enelungelo lobunikazi, ekhanyayo futhi esindisa amandla.
Igama lomkhiqizo: Ibhodi lokukhanyisa lebhokisi le-Acrylic light
Idizayini yokwakha yesakhiwo
Inkampani yethu inefektri enobuchwepheshe enendawo engamamitha-skwele angama-4,200 namabhokisi amane wokukhanya enza imigqa yokukhiqiza. IZhengcheng manje isebenza ngaphezu kwama-100 brand e-Asia futhi ikhiqiza cishe amamitha angaphezu kwama-30,000 wamabhokisi wokukhanya osindisa amandla ngonyaka.
Imboni yethu ifakwe imishini yokukhiqiza yobuchwepheshe, futhi inesikhunta esiningi sokukhiqiza. Ngemuva kokuthi amakhasimende abeke i-oda, singakwazi ukukhiqiza ngobuningi.
Ngaphezu kwalokho, abasebenzi banolwazi olunothile nokusebenza kahle kokukhiqiza okuphezulu. Inkampani yethu isungule ubudlelwano bokusebenzisana obunesikhathi eside nemikhiqizo eminingi, futhi ijabulela idumela elihle embonini yokwenza izimpawu.
Ngasikhathi sinye, sinefektri yethu, eyehlisa ikhomishini yomuntu ophakathi nendawo, futhi iphinde inciphise izindleko zakho zokuthenga.
Izitolo eziningi zivulekile emakhoneni, kanti amabhokisi okukhanya wendabuko awashintshi kalula futhi awafanele ukufakwa. Kodwa-ke, amabhokisi wokukhanya weZhengcheng angacwiliswa ngentando, ngokubukeka okuhle nezimpawu ezikhanyayo eziheha amakhasimende.
Langaphambilini Uphawu lwesuphamakethe lwangaphandle lweChaoshifa
Olandelayo: Ibhodi lokungena lesitolo esilula se-Ministop
Ikhemisi Signboard Acrylic
Izimpawu Ezikhanyisiwe, I-Pharmacy Signboard, Izimpawu Zokukhangisa, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, I-Blister Light Box Signboard, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso,